तपाईलाई यी लक्षण देखिए ? बुज्नुहोस् शरीरमा पानीको कमी हुनसक्छ ! – News Nepali Dainik
तपाईलाई यी लक्षण देखिए ? बुज्नुहोस् शरीरमा पानीको कमी हुनसक्छ !
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण १७, २०७७ समय: २०:०२:२७
काठमाडौँ । हामीलाई शरीरमा पानीको कमी भयो भने विभिन्न समस्याहरु देखा पर्न थाल्छ तर हामीलाई के भएर यस्ता समस्या देखिएका छन् भन्ने थाहा हुँदैन । यहाँ हामी शरीरमा पानीको कमि हुँदा देखिने लक्षणबारे जानकारी दिदै छौ:
टाउको साह्रो गरी दुख्छ: टाउको दुखिरहेको छ, तर के कारणले दुखेको हो भन्ने थाहा हुँदैन त्यसका कारण शरीरमा पानी कम भएर हो । त्यसरी टाउको गह्रौँ भएर दुखेमा तत्काल पानी पिउने र १० मिनेटको फरकमा थोरै केही खाने । त्यसले तत्काल दुखाइ कम हुन्छ ।
छाला सुक्खा हुन्छ : चलिरहेको मौसम विपरीत प्रायस् तपाईंको छाला सुक्खा रहन्छ, बारम्बार ओठ फुट्ने हुन्छ भने त्यसको कारण पानीको कमी हो । यदि तपाईं नरम र सुन्दर छाला चाहनुहन्छ भने आवश्यकतअनुसार प्रशस्त पानी पिउनुपर्छ ।
सुत्नु भन्दा अगाडी झुक्केर पनि नगर्नुहोस् यी काम, नत्र..
Last Updated on: March 1st, 2021 at 8:05 pm